Gary Neville oo shaqada laga cayriyay - BBC Somali
Gary Neville oo shaqada laga cayriyay
Laacibkii hore uga tirsanaan jiray difaaca kooxda Manchester United iyo qaranka England ee ayaa laga cayriyay shaqadii maamulenimada kooxda Valencia kaddib markii uu muddo afar bilood ka yar jagadaasi hayay naadiga reer Spain.
Ciyaartoygan hore oo 41-jir ah, oo qayb ka ah maamulayaasha safka ugu jira xulka qaranka, waxaa markii ugu horreysay shaqadaas lasiiyay bishii December ee sanadkii hore.
Valencia waxay ku guulaysatay saddex ka mid ah 16 ciyaarood ooka tirsan horyaalka dalkaas intii uu maamulayay Nevill, guud ahaanna muddadaas waxay guulaysteen 10 ka mid ah 28 ciyaarood ciyaarood oo ay safteen.
Neville waxaa uu sheegay inuu doonayay in uu sii shaqeeyo laakiin natiijooyinku aanay ahayn heerkii uu doonayay ama naadigu ay ka rabeen inay kooxda gaarsiiyo.
Neville waxaa markii ugu horreysay loogu baaqay inuu is-casilo kaddib markii ay 7-0 uga badisay kooxda Barcelona kulankii Copa del Rey lugtii 1aad ee semi-final-ka ee bishii February.